အကြမ်းဖက်မှုနှင့် အစွန်းရောက် တိုက်ဖျက်ရေး အပါအဝင် ဒေသတွင်း တည်ငြိမ်မှု အခြေအနေများနှင့် ပတ?? - Yangon Media Group
အကြမ်းဖက်မှုနှင့် အစွန်းရောက် တိုက်ဖျက်ရေး အပါအဝင် ဒေသတွင်း တည်ငြိမ်မှု အခြေအနေများနှင့် ပတ??
၁၃ ကြိမ်မြောက်ကျင်းပခဲ့သည့် အာရှ- ဥရောပ (အေဆမ်) နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးအတွင်း အကြမ်းဖက်မှုနှင့် အစွန်းရောက်မှုများကို ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေး အပါအဝင် ဒေသတွင်း အေးချမ်းတည်ငြိမ်မှု စသည့် ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ အဓိကထား ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပလျက်ရှိသည့် အဆိုပါ အစည်းအဝေးအပြီး နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်က နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ အက်စ်တိုနီးယားနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာဆာ့ဗ်မက်ဆာနှင့် စပိန်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး မစ္စတာအိုင်ဒယ် ဖွန်ဆိုကက်စထရိုတို့မှ နေပြည်တော်တွင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် နိုင်ငံ ခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အစည်းအဝေးအတွင်းငြိမ်းချမ်းရေး၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရရှိရေးအတွက် မိတ်ဖက်ဆက်ဆံမှုကို ခိုင်မြဲအောင် ဆောင်ရွက်ကြပါစို့ဟူသည့် အစည်းအဝေး၏ ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီ ဆွေး နွေးမှုများကို အောင်အောင်မြင်မြင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ ထို့အပြင် နိုဝင်ဘာ ၂ဝ ရက်က ကျင်းပသည့် မျက်နှာစုံညီ အစည်းအဝေးများတွင်လည်း အမြင်ချင်း ဖလှယ်ခဲ့ကြပါကြောင်းနှင့် အဓိက ဆွေးနွေးချက်များအနေဖြင့် ဒေသတွင်း စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဒေသတွင်း အေးချမ်းတည်ငြိမ်မှု၊ အေဆမ်မိတ်ဖက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ ချိတ်ဆက်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့် အစွန်းရောက်မှုများကို ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ခြင်းစသည့် ကိစ္စရပ်များကို အလေးထားဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှု၊ တရားမဝင်ငါးခိုးဖမ်းမှု၊ လက်နက်ဖျက်သိမ်းမှု၊ နျူကလီးယားလက်နက်နှင့် လူအစုလိုက်အပြုံလိုက် သေစေသည့်လက်နက်များ မပြန့်ပွားရေး၊ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး၊ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အရည်အသွေးမြင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများတိုးချဲ့မှု၊ ဒေသ တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာ မူဘောင်မှတစ် ဆင့်ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း စသည့်ကိစ္စများကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အစည်းအဝေးအတွင်း နှစ်နိုင်ငံကြား အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးမှု ၉ဝ ကျော် လုပ် ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး အေဆမ်အစည်းအဝေးမတိုင်မီ နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်မှ ၁၉ ရက်အထိကျင်းပခဲ့သည့် အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ အစည်းအဝေးကိုလည်း ကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသည့် မိတ်ဖက်နိုင်ငံ ၅၃ နိုင်ငံကြား သဘောတူညီချက်ရရှိအောင် ညှိနှိုင်းယူရသည့် ကိစ္စသည် အလွန်ခက်ခဲပါကြောင်းနှင့် အပြီးသတ်ဆွေး နွေးခဲ့သည့် အကြောင်းအရာများကို အတည် ပြုနိုင်ခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ ဥရောပသမဂ္ဂ၏ အထူးကိုယ်စားလှယ် အက်စ်တိုးနီးယားနိုင်ငံ နိုင်ငံ ခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာဆာ့ဗ်မက်ဆာကလည်း ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်နှင့် ယူကရိန်း အကျပ်အတည်းကဲ့သို့သော ကိစ္စရပ်များနှင့် နျူကလီးယားလက်နက်များ မပြန့်ပွားရေးကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အ ရေး ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာတွင် မြန်မာအစိုးရ အနေဖြင့် သင့်တော်လျောက်ပတ်သည့် နည်း လမ်းကို မိမိတို့ တိုက်တွန်းလိုပါကြောင်း၊ ဘုံ စိန်ခေါ်မှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်နှင့် အ မြင်ချင်းဖလှယ်ရန် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ယခုကဲ့သို့ အစည်းအဝေး ကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သတင်း ထောက်များ၏ မေးမြန်းမှုကို ပြန်လည်ဖြေ ကြားရာတွင် ဥရောပနှင့် အာရှနိုင်ငံများမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အလွတ်သဘောအ စည်းအဝေးတွင် လက်ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ပတ်သက်သည့် ပြဿနာများကို ဆွေးနွေးခဲ့ ကြောင်းနှင့် မစ္စတာကိုယ်ဖီအာနန်၏ အကြံ ပြုချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရေးမှာ အမြင်ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးရှိပြီး ရေရှည်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပြန်လည်ထူ ထောင်ရေးနှင့် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားသည့် အကူအညီနှင့် ပတ်သက်သည့်ကိစ္စ ရပ်များကို ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်၍ မရနိုင်သည့်အတွက် အချိန်အတိအကျကို မိမိတို့ မသိနိုင်ပါကြောင်းနှင့် တစ်ဆင့်ချင်းသွားပြီး အောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း ထိုသို့လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်မှာ နိုင်ငံတကာ၏ ကူညီပံ့ပိုးမှု လိုအပ်ပါကြောင်းဖြေ ကြားခဲ့သည်။ ထို့အပြင် နေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးသူများ ပြန်လည်လက်ခံရာတွင် ယခင်က မြန်မာနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရတို့အကြား ရယူထား သည့် သဘောတူညီချက်များနှင့်အညီ စနစ် တကျ ပြန်လည်လက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းထောက်များ၏ မေးမြန်းမှုများကို ပြန် လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။ ၁၃ ကြိမ်မြောက်ကျင်းပသည့် အေဆမ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးအား အာရှနှင့် ဥရောပ ၅၁ နိုင်ငံတို့မှ ကိုယ်စားလှယ် ၅၄ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အ စည်းအဝေးသို့ ဥရောပနှင့် အာရှနိုင်ငံအသီး သီးမှ ကိုယ်စားလှယ် ၅ဝဝ ကျော် တက်ရောက် ခဲ့ပြီး ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်တွင်ကျင်းပမည့် ၁၄ ကြိမ် မြောက် အေဆမ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အစည်း အဝေးကို စပိန်နိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ်ကျင်းပ သွားမည်ဖြစ်သည်။
လယ်ယာမြေ သိမ်းဆည်းခံရမှု ဖြစ်စဉ်များအား ဝန်ကြီးဌာနများမှ တိတိကျကျ ဖြေရှင်းရန် လိုအပ်ကြောင်
”ဘဝမှာ အချစ်ဆုံး ယောက်ျားသုံးယောက်ကြောင့် ပြောင်းလဲမှုတွေလည်း အများကြီးဖြစ်သွားရတယ် ဆိုတာ?
ဒေါ်လာဈေး ကစားသူများကို မပျက်မကွက် အရေးယူပေးရန်လို
ငလျင်ဒဏ်ခံ ပုဂံဘုရားများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် ဂျာမနီ၊ ကိုရီးယား၊ အမေရိကန်၊ ဂျ